Sida loo Soo Celinta ka kaabta Lugood
Data waa waxa ugu muhiimsan ee dadka. Marka aad leedahay qalab kasta, aad leedahay wax badan oo xogta laga yaabo muhiim ah oo loo baahan yahay in la badbaadiyey goob xaqiijisatay. Data Luminta ama xiriirada noqon kartaa dhibaato halis ah, kuwa aan haysan nuqul ama raad raac ah oo xogta kuwaas. Daryaan nidaamka, kala carar lagu jiro software updates ama laga badiyay telefoonka noqon kartaa qarow. Sidaas sababta aan sameeyo gurmad ah xogta aad. Iyada oo update dhawaan macruufka, users laga yaabaa in ay waajahaan arimo oo ay jiraan fursadaha badiyay xogta qaar ka mid ah in warsiinta ah (iyagoo version beta, fursad u hesho qaali ah). Tani waa laga hortagi karaa haddii aad gurmad ah.
Ka soo kabashada xogta iyo soo celinta in goobaha warshad: jidkii rasmi ah
Haddii aad rabtid inuu ka soo kabsado dhammaan xogta una soo celiso goobaha warshad, waxaad kala socon kartaa this habka rasmiga ah. Sidoo kale waxaad kala socon kartaa this link rasmi ah si loo hubiyo in aad si sax ah u samayn, https://support.apple.com/en-us/HT204184
Waxaa jira laba hab oo lagu heli karaa in la soo celiyo xogta aad:
Waxaan ku talinaynaa Lugood (maxaa yeelay, waxaad heli kartaa meel dheeraad ah ayaa diyaar u ah gurmad, waxa aad heli kartaa macluumaadka ku offline hab sidoo.). Raac tallaabooyinka kuwan oo aad soo celin karo xogta aad si sahlan.
Talaabada 1: xiriiriyaan qalab macruufka ah in aad desktop, iyo abuurtaan codsiga Lugood ah.
Talaabada 2: fur menu File, u tag qalabka ka dibna dooro "Soo Celinta ka kaabta '.
Fiiro gaar ah: Dadka isticmaala Mac, menu waa si fudud u muuqda dhankiisii ​​bidix. Laakiin daaqadaha ama cid kale oo isticmaala OS, jaraa'id Alt key oo waxaad arki lahayd bar menu muuqan.
Talaabada 3: Dooro fursadaha gurmad sida ku tacaluqa.
Talaabada 4: Riix soo celiyo oo ha ku soo celiyo sii wado. Marka la dhameeyo, xirey kadibna qalabka iyo si toos ah u hagaagsan la kombiyuutarka.
Fadlan hubi in Lugood waa la cusboonaysiiyaa-qabadka fiican. Sidoo kale iska hubi wixii faahfaahin waafaqsan hor Socota u gurmad. Xogta laga yaabaa lumaan, haddii ay jiraan arrimo waafaqsan.
Haddii aadan rabin in aad tirtirto oo dhan macluumaadka, waxaa jira hab kale.
Habka ugu rasmiga ah inuu ka soo kabsado files ma soo kaban karaa dhammaan faylasha ka qalabka. Habka ugu offical tirtiri doonaa dhammaan macluumaadka ka qalab adiga oo aan wax raad ah. Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta eegista, kama helaysid xagga jidka ka soo baxay. Sidaas, waxa haddii ay jiraan hab fudud ka soo for this? Waxaad u baahan tahay qalab kaa caawin kara in aad ku eegaan xogta ka Lugood iyo iCloud oo iyaga si fudud loo soo celiyo.
Haddii aad doonayso inaad qabato ah oo gurmad gaar ah file, waxaad isticmaali kartaa Wondershare codsiga ka dhigaya gurmad aad u fudud oo anfacaya. Waxaad eegista soo celin karaa xogta laga gurmad iTuens ah. Taas macnaheedu waa in inta aad waayi doonaan dhammaan xogta la isticmaalayo habka rasmiga ah Lugood, la Wodnershare, aad eegista soo celin kartaa dhammaan xogta aad u baahan tahay. Waxyaabaha Wondershare ka mid ah ugu wanaagsan ee codsiyada la heli karo iyo xalalka dhibaatooyinka aad mobile waa laga badiyay xogta ka mid yahay arrin khatar ah.
Haddii aad raadineyso sida loo isticmaalo ee Wondershare software, waa mid fudud. Waxaad raaci kartaa tallaabooyinkan si loo soo celiyo gurmad ah qalabka.
Talaabada 1: Inaad doorato "kabsado Lugood ee kaabta File" ka dib markii rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Markaas waxaad ka arki kartaa oo dhan files gurmad in Lugood soo bandhigay liiska.
Talaabada 2: Dooro faylka gurmad in aad rabto in aad soo celiyo, oo guji "Start Scan" button. Markaa sug oo kaliya in mudo ah ilaa scan ku dhamaato.
Talaabada 3: Hadda, waxaad ku eegaan karo content oo la soo saaro gurmad Lugood oo dhan oo dooro xogta in aad rabto in aad soo kabsado. Guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer ama si toos ah qalab aad.
Fiiro gaar ah: Xogta Celinay qalab aad si fudud ku daray in qalab aad. Waxa aan marna masixi doono wixii xog ah ee hadda jira ku saabsan qalabka, taas oo ka duwan si toos ah loo soo celiyo kaga imaanayo Lugood. Haddii aad rabto in aad soo celin xogta aad ka iCloud gurmad file, sidoo kale waxa aad samayn karaa jidka la mid ah.
Isticmaalka Wondershare xor u yahay inuu ka soo kabsado faylasha sida looga baahan yahay (nooc gaar ah) ku siinayaa. Tani waxay ka hortagtaa isticmaalka network-dhaafka ah, helitaanka deg deg ah iyo download fudud. Waxaad kala soo bixi kartaa files aan ka saareen files ka isha (taas oo laga yaabo inay dhacaan ay dhacdo in habka rasmiga ah).
Sidoo kale waxaa jira muujinta a waxtar leh ay bixiyaan Wondershare, oo awood aad ka bogsato faylasha dhawaan la tirtiro. Laakiin waxaa jira xad gaar ah. Ka dib mararka qaarkood, qalab macruufka qabowjiyaa nidaamka xusuusta iyo nadiifin doonaa kayd ah oo laga yaabo in macluumaadkan tirtirto. Sidaas waxaa lagu talinayaa in ay sameeyaan ficilkan ugu dhaqso badan. Haddii kale fursadaha inuu ka soo kabsado xogta waa noo dhow yahay wax aan macquul aheyn.
Kor ku xusan laba hab kaa caawin kara inaad soo kabsado xogta aad in sida ugu hufan, iyo fudayd xad-dhaaf ah. Si kastaba ha ahaatee, fadlan hubi noocyada file taageeraya hor Socota habraaca soo kabashada. Haddii aad rabto in aad sida ugu dheer oo ka soo baxay, waxaad had iyo jeer u isticmaali kartaa Lugood. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo la isticmaalayo Wondershare hubaal waa habka ugu fiican soo baxay. Tani waa sababta Wondershare kuu oggolaanayaa in aad wax badan oo dhan in ka badan kaliya soo celiyo files sameeyo. Wondershare Shaqeeyaa kala duwan ee qalabka iyo shaqeyn karaan sida one-stop aad xal.
Sida loo ka app iPhone wareejiyo music in Lugood
Lugood Library Analyzer - Falanqeeyaan Lugood Library in gooldhalinta
Sida loo ka Lugood Library Delete tus | Saar tus
> Resource > Lugood > Sida loo Soo Celinta ka kaabta Lugood